အီသီယိုးပီးယားလူမျိုးပိုင် လေယာဉ်တစ်စင်း ပျက်ကျသဖြင့် စီးနင်းလိုက်ပါလာသူ အားလုံးသေဆုံး။ – SoShwe
Home/Other/အီသီယိုးပီးယားလူမျိုးပိုင် လေယာဉ်တစ်စင်း ပျက်ကျသဖြင့် စီးနင်းလိုက်ပါလာသူ အားလုံးသေဆုံး။
အီသီယိုးပီးယားလူမျိုးပိုင် လေယာဉ်တစ်စင်း ပျက်ကျသဖြင့် စီးနင်းလိုက်ပါလာသူ အားလုံးသေဆုံး။
admin March 11, 2019	Other Leaveacomment
လေကြောင်းလိုင်းရဲ့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အရ လေယာဉ်ပေါ်တွင် စီးနင်းလိုက်ပါလာသူ ခရီးသည်စုစုပေါင်း ၁၄၉ ဦးနဲ့ လေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်း ၈ ဦး (စုစုပေါင်း ၁၅၇ ဦး) စလုံး သေးဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့မနက် ၈ နာရီ ၃၈ မိနစ်မှာ လေယာဉ်အမှတ် ၃၀၂ က Addis Ababa Bole အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေ စတင်ထွက်ခွာပြီး ၆ မိနစ်အကြာမှာတော့ အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီး ပျက်ကျသွားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခေါက် ပျက်ကျခဲ့တဲ့ လေယာဉ်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာတုန်းက အင်ဒိုနီးရှားမှာပျက်ကျခဲ့တဲ့ Boeing 737 လေယာဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုလေယာဉ်တုန်းကလည်း သေဆုံးသူ ၁၈၉ ဦးထိရှိခဲ့ပြီး ဂျကာတာလေဆိပ်ကနေ ပျံသန်းပြီမိနစ် အနည်းငယ်အကြာမှာ ပင်လယ်ပြင်ထဲကို ပျက်ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Previous ???????????????? ??????????????? ???????????? ???? ??????????? ??????????
Next ??????????????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????????? ?????????????